Sheegashooyin kala duwan ayaa kasoo baxaya Dowladda iyo Alshabaab - BBC News Somali
Sheegashooyin kala duwan ayaa kasoo baxaya Dowladda iyo Alshabaab
23 Luulyo 2018
Image caption Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab
Dagaalamayaasha Alshabaab ayaa weerar ku ekeeyay xero ay si wada jir ah u degenaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qeybta 43-aad iyo kuwa Jubbaland, waxaana weerarkaas kasoo baxaya warar dheeraad ah.
Waa markii sedexaad oo xaruntaasi weerar lagu qaado muddo bilo ah tan iyo intii ciidamada ay saldhig ka dhigteen halkaas.
Weerarkii saakay waxaa loo adeegsaday labo gaari oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, waxaana xigay dagaal fool ka fool ah o oculus.
Sida ay xaqiijiyeen illo wareedyo muhiim ah oo Jubbaland ka tirsan, Alshabaab ayaa gabi ahaanba la wareegay xerada Baar Sanguuni, iyaga gubay teendhooyinkii ay ciidanka ku hoyanayeen, waxaana goobta isaga baxay askartii dowladda.
Inkasta oo aysan jirin illo madax banaan oo xaqiijinaya, haddane illaha aan la hadalnay ee Jubbaland waxa ay xaqiijinayaan geerida afar askari iyo dhaawacyo aysan tiradooda sheegin.
Hase yeeshee wasiir ku xigeenka warfaafinta dowladda Federaalka Aadan Isaaq Cali ayaa wakaaladda wararka ee SONNA u sheegay in dagaalka lagu dilay 87 dagaalamayaal oo Alshabaab ka tirsan. Wuxuu intaas ku daray in ay ku raadjoogaan firxadka Alshabaab.
Alshabaab oo qabsatay deegaanka Halgan
Xooga dalka Soomaaliya ma jabin karaan Alshabaab?
Alshabaab oo soo daysay filin muujinaya askari reer Uganda
Dhanka Alshabaab, shabakad dhankooda u janjeerta ayaa tabisay in weerarkii Baar Sanguuni ay ku dileen 27 askar. Iyaga oo soo xiganaya Afhayeenka Alshabaab Cabdicasiis Muscab, ayay shabakatu tabisay in sidoo kale ay meesha ka rarteen saanad militari.
Illaha ay BBC-da la hadashay waxa ay sheegeen in askarta dowladda kaga dhintay uu ka mid yahay korneel ciidamadda xoogga dalka oo isagu maamulayay ciidanka meesha joogay iyo haweenay la gawracay. Balse ma jiraan illo madax banaan oo taas xaqiijinaya.
Waxaa sidoo kale oo ka sheegay askar ay Alshabaab horey usii wateen iyaga oo nool sida ay illahani sheegayaan, balse dhanka Alshabaab ma jiraan wax warar ah oo kasoo baxay.
Weerarka ayaa yimid xilli taliyihii qeybta 43aad ee ciidanka xoogga ee fadhigoodu yahay Kismaayo Jeneraal Ismaaciil Saxardiid xilkii laga qaaday, mas'uulkii lagu soo badalay Jeneraal Cali Bagmadowna laga celiyay garoonka Kismaayo kadib markii ay Jubbaland saluugtay qaabka loosoo magacaabay.
Wararka kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in unug ciidan ah oo sahan ku maqnaa la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Waa meel caynkee ah Baar Sanguuni?
Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Jubbaland
Image caption Waa taaladda kala baraha oo dib loo dayac tiray
Halkan waa meesha ay marto xariiqda dhulbaraha adduunka, waxaana saldhig ciidan uu ku yiilay illaa biloowgii sanadkan, xilligaas oo waxoogaa horu socod ah sameeyeen ciidamada dowladda ee kala ah kuwa federaalka iyo kuwa Jubbaland.
Magaalada Kismaayo ayay kaga beegantahay dhanka waqooyi, dhawaan ayaa waxaa soo baxay sawirro muujinaya taalladii dhulbaraha oo dib dayactir loogu sameeyay, waxaana sawirka ka muuqday ciidamo Jubbaland oo hubeysan.
Taallada ayaa la mariyay rinjiga buluugga ah ee calanka Soomaaliya, dushana laga suray xiddigta shanta gees.
Meel aad ugu dhow taallada ayay xerada ku taalaa, waxaana sanadkan kaliya xeradaas lagu qaaday saddex weerar.
Shabakadaha Alshabaab taageera ayaa xeradan ku tilmaamay meel ay ciidamada Maraykanka dajiyeen askarta Soomaalida.
Bishii hore, taliska Afrika ee ciidanka Maraykanka ayaa qirtay in askari looga dilay meel u dhow Baar Sanguuni. Waxaa kale oo weerarkaas lagu dhaawacay afar ciidamada Maraykanka ah.